वामदेव गौतमको सिकार अब को ? यी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैछ अध्ययन – Medianp
वामदेव गौतमको सिकार अब को ? यी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैछ अध्ययन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २६, २०७५११:१९0
काठमाडौं, २६ असोज । अन्ततः आफ्नो राजनीतिक छवि धूमिल बनाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतमले तत्कालका लागि सांसद बन्ने इच्छा थाती राखेका छन् । अब काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरको राजीनामा पनि पार्टीले स्वीकृत नगर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको १० महिनामै उपनिर्वाचनमार्फत सांसद बन्ने वामदेवको चाहनामा सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र काठमाडौं ७ का मतदाता बाधक बन्ने भएपछि उनी पछि हटेका हुन् ।
यसको मतलव वामदेव मौन बस्छन् भन्ने पनि होइन । केही समयपछि सरकारप्रति जनताको आलोचना मत्थर हुन थालेपछि वामदेवलाई सांसद बनाउन पार्टीले आफैंले पहल गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी ‘मिनी जनमतसंग्रह’ जस्तै हुने र त्यसले एकैपटक नेकपा र वर्तमान सरकारको हैसियत परीक्षण गर्ने भएकाले वामदेवलाई अघि नबढ्न पार्टीभित्रैबाट व्यापक दबाब दिइएको हो । जसले गर्दा उनी ‘ब्याक’ भएका हुन् । यद्यपि यस घटनाले नेकपामा राजनीतिक सन्तुलन भने बिगारिदिएको छ ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, टंक कार्कीलगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमै वामदेव गौतमको आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि वामदेवको उपनिर्वाचनबाट सांसद बन्ने इच्छाको विपक्षमा थिए ।
स्रोतका अनुसार करिब ६ महिनापछि वामदेवलाई उपनिर्वाचनबाट सांसद बनाउन प्रयास थालिने भएको छ । तर, त्यसका लागि पार्टीले भित्रभित्रै रणनीति अख्तियार गरी पछि मात्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यसका लागि अहिले नयाँ निर्वाचन क्षेत्रको खोजी भएको छ ।
जसमा काभ्रे २ र नवलपुर २ मा नेकपा नेताहरूले अलि बढी नै चासो देखाएको बुझिएको छ । काभ्रे २ का सांसद गोकुल बास्कोटा हुन् । उनी अहिले सञ्चारमन्त्री छन् । उनले कांग्रेसका मधु आचार्यलाई १७ हजार बढी मतले पराजित गरेका थिए । त्यसैले बास्कोटालाई राजीनामा गर्न लगाएर पार्टीले उपनिर्वाचन गराउन सक्ने एउटा सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ । बास्कोटा अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा विवादित मन्त्री छन् ।
त्यस्तै, नवलपुर २ वामपन्थीको किल्ला मानिन्छ । सो क्षेत्रबाट सधैंजसो कम्युनिस्ट उम्मेदवार नै निर्वाचित हुँदै आएका छन् । लुम्बिनी अञ्चलमा तत्कालीन एमालेले एउटा पनि सिट नजित्दा त्यतिबेलाको नवलपरासी २ बाट एमालेका मझिलाल थारु थनैतले चुना जितेका थिए । अहिले नवलपुर २ बाट तिलक महत सांसद छन् । नवलपुर २ बाट सांसद बनेका कोही पनि मन्त्री नबनेकाले वामदे गौतमका लागि खाली गरेर उनलाई जिताएर पठाउनुपर्ने विषयमा पनि नेकपामा छलफल चलेको बताइन्छ ।
यसअघि वामदेवका लागि डोल्पा, प्युठान, बाँके, धनकुटा, ललितपुर १ लगायतका निर्वाचन क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा चलेको थियो । पार्टीले आधिकारिक रूपमै वामदेवलाई सांसद बनाउन इच्छा नदेखाएमा व्यक्तिगत चाहनाले अब उनी चार वर्षका लागि थान्को लागेको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ ।